कियाले पुरानो होइन नयाँ मोडेलका... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडाैं असार २९
लकडाउन खुकुलो भएपछि नेपालमा चारपांग्रे सवारी साधनमा अफरहरूको बाढी नै आइरहेको छ।
आफ्ना गाडी विक्रीका लागि धेरै जसो कम्पनीहरूले नयाँ-नयाँ अफर ल्याइरहेका छन्। नयाँ अफरसँगै लकडाउनलाई बिर्संदै चारपाङ्ग्रे सवारी साधनका शोरूमहरूमा ग्राहकको भीड देख्न सकिन्छ।
लकडाउनमा सवारी साधनमा ल्याइएको अफर लगायतका विषयमा हामीले किया मोटर्स नेपालका एजिएम अनिश लामिछानेसँग कुराकानी गरेका छौं-
१. लकडाउन केही मात्रामा खुकुलो भएपछि कियाले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि कस्तो अफर ल्याएको छ ?
अहिले हामीले २०२० बिएस सिक्स मोडलका गाडी ग्राहकहरू समक्ष ल्याएका छौं। यो नयाँ मोडल हो। हामीले पुरानो मूल्यमा नै सोउल इभी गाडी ग्राहकहरूसमक्ष विक्री गर्ने योजना अघि सारेका छौं।
२. नेपालस्थित अन्य अटोमोबाइल कम्पनीका डिलरहरले पनि नयाँ-नयाँ र आकर्षक अफर ल्याएका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अफर जहिले पनि ग्राहकहरूलाई लागि निकै उपयोगी हुन्छ। तर धेरै छुटले ग्राहकहरूको रिसेल भ्याल्यु कम गरिदिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
धेरै अटोमोबाइल कम्पनीसँग विएस फोर अर्थात् २०१९ मोडेलको गाडी छ।
उनीहरूले त्यसलाई सस्तो मूल्यमा ग्राहकहरूलाई बेच्नुलाई म स्वभाविक मान्छु। भारतीय सरकारले बिएस फोर मोडेलको गाडीमा रोक लगाइसकेको छ। त्यसैले नेपालमा पनि अटो मोबाइल कम्पनीहरूले पुरानो मोडेलका गाडीमा धेरै छुट दिएका छन्।
३. नयाँ अफर ल्याएपछि ग्राहकको मनसाय के कस्तो पाउनुभएको छ?
अफरपछि ग्राहकहरू पडक्टका बारेमा जानकारी लिन अधिक मात्रामा आइरहेका छन्। सुविधाका बारेमा जानकारी लिइरहेका छन्। हाम्रो प्रडक्ट सेल्टोसले अहिले राम्रो बजारभाउ लिइरहेको छ। यसमा नयाँ विएस सिक्स इन्जिनका साथै फिचरहरुमा पनि सबैभन्दा अगाडि छ।
४. सरसर्ती हेर्दा लकडाउन दशैँसम्म पनि सहज हुने देखिदैँन । सबैभन्दा गाडी नाडा अटो शोमा बेच्नु हुन्थ्यो गाडी बेच्ने तपाईँहरुको आगामी रणनीति के छ ?
कोभिड १९ को कारण अटो शो नहुने सम्भावना छ। हामी पनि अटो शोमा जाने मनसायमा छैनौं। हामीले ग्राहकलाई आकर्षित गर्नका लागि शो रुममा नै विशेष कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका छौं। दशैँका लागि हामीले नयाँ सोनेट लन्च गर्ने तयारी गरिरहेका छौं।
५. नेपाली बजारमा कियाका कुन प्रडक्टले राम्रो बजार लिएको छ र किन ?
स्पोर्टेज सबैभन्दा बढी बिक्री हुने एसयुभीमा पर्छ। निरोले पनिराम्रो बजार लिएको छ। हामी सोनेटले पनि नेपाली बजारमा राम्रो बजार लिन्छ भन्ने आशालाई प्रतिक्षा गरिरहेका छौं।
६. सरकारले इलेक्ट्रिक गाडीमा कर बढाएको छ यसबारे तपाईँको धारणा के छ?
सरकारले गरेको यो निर्णय निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ। किनभने ग्राहकहरु विस्तारै विस्तारै इलेक्ट्रिक गाडीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन। सरकारको यो निर्णयले इलेक्ट्रिक सवारी साधनको भविष्यमा अनिश्चितता खडा गरिदिएको छ।
इलेक्ट्रिक गाडीका लागि चार्जिङ स्टेशन र सेवा केन्द्रको भविष्य पनि डामाडोल बनाइदिएको छ। स्पेयर्स पार्टस र वारेन्टीमा केही समस्या हुने छैन भनेर म कियाका ग्राहकहरुलाई विश्वस्त बनाउन चाहन्छु।
७. र अन्त्यमा कियाकै गाडी किन्न किन्ने अरु पनि गाडी बजारमा छन।
अटो क्षेत्रमा किया विश्वभरमा नै गुणै गुणले भरिएको साधनका रुपमा परिचित छ। जेडी पावर सर्वे २०२० मा कियाले लगातार ६ वर्षसम्म शीर्ष स्थान हासिल गरिरहेको छ।
अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने किया बिएस सिक्स मोडलको सवारी साधन पर्यावरण र रिसेल भ्याल्युको लागि निकै उपयोगी छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २९, २०७७, १७:२४:००